6061 Aluminium 3ESIKOLWENI x 5ngokunjalo thina Rosin Amacwecwe Beka heater Controller Heavy Duty Rosin Press Kit isilawuli ezimbini izifudumezi iCartridge - China Dongguan Amon Hardware
6061 Aluminium 3ESIKOLWENI x 5ngokunjalo thina Rosin Amacwecwe Beka heater Controller Heavy Duty Rosin Press Kit isilawuli ezimbini izifudumezi iCartridge
Eyona ngxaki inkulu ngokucinezela rosin na iindleko zokusebenza. Ngaphandle kokuba uzimisele yakho yayama ngaphandle izixa ezincinane yentlaka usebenzisa straightener iinwele, nokuphuma kwakho ukuba kufuneka ukuchitha inyuku ezimbalwa. Ndibone eninzi koomatshini ezinkulu hamba ukuba amawaka eerandi, kodwa bachitha ukuba wouldn`t kakhulu ukwenza into ngaphandle ukuqhuba lakho ishishini.
Ukuba yakho unomdla ezinye rosin kakuhle kwi isivuno enkulu nokuphuma kwakho, ukuba kufuneka izinto ezimbini:
Xa beqhubeka rosin, ngaphantsi ubushushu iyafuneka iingcinezelo ngaphezulu, ithetha ukuba ungakwazi phantse ebandayo cofa rosin, ukuba unalo nesixhobo esifanelekileyo. Kodwa, lets malunamathele elishicilelwe phantsi apha. I`m malunga ukukubonisa indlela ungenza eyakho DIY Rosin Cinezela ngaphantsi kwe $ 500.
Thats ilungelo, kumatshini ukuba isidlo ngaphandle 12,000lb xi kunye nolawulo lobushushu ngenxa izivuno kakhulu! Best zonke, kuthatha nje imizuzu embalwa ukuze amise kwaye usebenzise.
Let`s zobuso, ngokucinezela Rosin yeyona ndlela ingcono yayama onke amanzi ayo evela kwentsangu. Ngokusebenzisa ubushushu kunye noxinzelelo ukufumana intlaka evela njengomfuno (wezityalo), nabani na unako ukuvelisa ethile nentlaka kwizinga eliphezulu.
Eyona ngxaki inkulu ngokucinezela rosin na iindleko zokusebenza. Ngaphandle kokuba uzimisele yakho yayama ngaphandle izixa ezincinane ze intlaka usebenzisa straightener iinwele , nokuphuma kwakho ukuba kufuneka ukuchitha inyuku ezimbalwa. Ndibone eninzi koomatshini ezinkulu hamba ukuba amawaka eerandi, kodwa bachitha ukuba wouldn`t kakhulu ukwenza into ngaphandle ukuqhuba lakho ishishini.
Uxinzelelo High - ubuncinane 500lb ukuba 1,000lb (iitoni 2+ ekhethwayo)
Heat - 150 ° F ku-350 ° F (200 ° F ikhethwayo)
Xa beqhubeka rosin, ngaphantsi ubushushu iyafuneka iingcinezelo ngaphezulu, ithetha ukuba ungakwazi phantse ebandayo cofa rosin, ukuba unalo nesixhobo esifanelekileyo. Kodwa, lets malunamathele elishicilelwe phantsi apha. I`m malunga ukukubonisa how you can make your own DIY Rosin Press for less than $500.
Ukuze kwakhiwe le isixhobo yonke oyifunayo iimveliso ezimbini ilula:
Double Rosin Press Amacwecwe Kit Heavy Duty Dual Controller Box kunye Wired Ubushushu Intonga
6-Ton fracturing Shop Floor Press kunye Amacwecwe Cofa uze H Isakhelo
Ukuba akunjalo yakho yokothuka ngokupheleleyo kodwa, lets kusiwelela iinkcukacha zombini. Kwakhona le ndlela ilungileyo pre ngokucinezela rosin cookies for ephakamileyo terpenoid izivuno.
I fracturing Press
A enamandla ton ezintandathu ucofe igcinwa eqinileyo H-isakhelo. Zokwakha Super owomeleleyo elula thats Kulula ukuliseka. NaLindiili icala zinemingxuma ezikuvumela ukunyenyisa yokusebenzela. Kwakhona iquka 2 iipleyiti kumaphephandaba, sebenzisa kubo! Baya ukukhusela iipleyiti zakho zombane. Ezinobunzima elipheleleyo 60lb, unako ngokukhuselekileyo igeza ngaphandle iitoni 6 koxinzelelo, indlela ngaphezu kuya kufuneka.
Ubushushu Ukulawula .K Press
0 ° F ku 415 ° F ngemizuzu !, La macwecwe umsebenzi onzima nga kuvelisa ngakumbi ukuba ubushushu aneleyo ukumelana phezulu 8000psi. Best zonke, amacwecwe ukuba lashushu lobushushu elifanelekileyo kunye ibhokisi control elektroniki! Wena don`t kufuneka jerk ngeenxa amaziko okupheka, iipleyiti, okanye usebenzisa itotshi ngesibetho njengabathile oomatshini.
Ukuba ukhe icinezelwe rosin ngaphambili, kufuneka ube ngumbono omhle omhle nto ekufanele siyenze nendlela kulula oku ukuyisebenzisa. Ukwakha cinezela yakho kuya kongela wena Ndiziva cash aze asebenze ngokunjalo ukuba ndingalungile ngaphezu kwezinye oomatshini ukuba kabini ixabiso.
1.Plug nokudlala 5 "x3" platen kumisa. Sisebenzisa 6061 aluminiyam ngenxa yokuba ukukhanya, onamandla, kwaye transfer obalaseleyo ubushushu, ebangela amabala hot!
iipleyiti 2.Dual eshushu, bobabini babelana zone.This ubushushu enye i uyilo locikido, wavavanywa, nezingqinekayo kunye iziphumo ezigqwesileyo amakhulu meko. Ndiye We hlola zombini ngokubanzi, akukho sivuno engcono okanye umgangatho kwi esisebenza ezimbini.
esweni lobushushu echanileyo 3.Fully ukusuka 0-300F kamnandi. isivamvo ubushushu yethu uqheliso ngqo iipleyiti, ekunika ngqo lobushushu platen lokwenyaniso.
5.Made ukuba ilingane nawuphi na umatshini ngamanzi ukuya kwiitoni ezingama-20 kunye nenkunzi yegusha 2 "ubukhulu okanye ngaphantsi.
Ayanda iipleyiti yethu press lwakho olukhethayo yinto nje elula ngokuqinisa ngezikhonkwane ezimbini iseti (hex keys included) kwi yemvu. Cwangcisa kuthatha ngaphantsi kwemizuzu emi-5!
6.Reach ubushushu bakho ezinqwenelekayo ngemizuzu engaphantsi kwe-10 kunye 500w ezinamandla izinto zethu iCartridge ukufudumeza.
7.The .K ungahlawula ngokwabo kwisithuba seeyure ezimbalwa yokusebenzisa!
Le Kit iquka:
isilawuli Digital iingcingo ukuba elementi iCartridge 500w ezimbini
iqhosha Hex entabeni iipleyiti yakho cinezela lwakho olukhethayo
Enye Unyaka Warranty Full kwi elektroniki yakho